I-Sportman Hunting Cabin & Retreat @ Madreon Bay - I-Airbnb
I-Sportman Hunting Cabin & Retreat @ Madreon Bay
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguThe Sportsman
UThe Sportsman yi-Superhost
Ecaleni kweebhanki zendalo zaseMadreon Bay, iThe Sportsman yindawo entle eyi-3,130 square foot eyakhiwe ngamaplanga, eyakhiwe ngo-2011. Yimayile nje ezimbalwa ukusuka kumzantsi weHolly Grove kunye nemizuzu eyi-45 xa uhamba ngemoto kwimpuma yeStuttgart, AR. Le ndlu ime kakuhle ukuze kufikelelwe kwii-waterfowl, i-geese, i-deetail deer, umhlaba omncinci womdlalo kawonke-wonke, ukuloba ngamanzi acocekileyo, kunye neendlela zendalo.
Umntu wezemidlalo eMadreon Bay yindlu yamaplanga engasemanzini kunye nekhefu, efumaneka kubantu abaqeshisa ixesha elifutshane nelide kunye namalungu eDuck Club ngexesha lonyaka ka-2019 ukuya kutsho ngo-2020.
UMNTU wezemidlalo uneendlela EZIMBINI ZOKUQESHISA ONOKUKHETHA KUZO:
#1: Eyona ndlu yamaplanga (inqanaba lesibini nelesithathu lendlu yamaplanga) - ilala abantu abayi-11. Ilungele amaqela amakhulu okanye iiklabhu zedada.
#2: Isiseko (Umqolomba weMan) Inqanaba Lokuqesha (inqanaba eliphantsi). Inendawo yayo yokungena kunye nesitudiyo. Ilungele abazingeli kunye nabadobi okanye amaqela amancinci. Kulala abantu abayi-4 (kukho indawo eyaneleyo yokubeka oomatrasi abampontshwayo) - Nceda ujonge enye indlu yethu ukuze ubone amaxabiso nokufumaneka.
INDLU YAMAPLANGA EYINTLOKO
Umgangatho wesibini nowesithathu, okanye "indlu yamaplanga" njengoko siyibiza, inendawo yayo yokungena kumgangatho weveranda.
Izinto ezinokusetyenziswa ziquka:
* Igumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu negumbi lokuhlambela elivulekileyo elikumgangatho ophambili. Iikhabhathi ezinkulu ezimbini.
* Igumbi elihle kumgangatho ophambili elinesilingi ebugophe. Vula indawo yokudlala ngeefestile ezijonge phezu kweMadreon Bay.
* Ikhitshi elinomphezulu wokupheka, ifriji/i-deep freezer, umatshini wokuhlamba izitya, ioveni ephindwe kabini, i-microwave, umatshini wokwenza ikofu, i-toaster, kunye neendawo zokuhlala zosapho kwindawo yokutyela.
* Iveranda enkulu ngaphambili nangasemva kwendlu yamaplanga (umva ujonge iMadreon Bay).
* Igumbi elikhulu lokuhlamba impahla elinomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla nekhabhathi yokugcina impahla
* Umgangatho wesithathu unamagumbi okulala eendwendwe ayi-2 anegumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu. Igumbi lokulala #1 lineebhedi ezimbini ezikhweleneyo (ii-twin phezu kweebhedi ezimbini ezipheleleyo) kunye nebhedi enye (ilala abantu abayi-6). Igumbi lokulala #2 lineebhedi ezimbini ezidibeneyo kunye nebhedi enye (ilala abantu abayi-3).
Bonke abantu abarentayo baseThe Sportsman bayakwazi ukuya eMadreon Bay besebenzisa indawo entsha yesikhephe yabucala ekwindawo enezilayidi eziyi-2, indawo yokugcina impahla, iindawo zokucoca ukuze izikhephe ezongezelelekileyo zidibane newebhusayithi yokuqubha.
Uza kufuna ukuza nezinto zakho zokutya nezinye izinto eziyimfuneko njengoko indlu yamaplanga ingafumaneki lula kufutshane nazo naziphi na iivenkile zokutya okanye ezaziwayo. Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka e-Holly Grove yi-J & J 's One Stop, apho ungathenga khona igesi, izimuncumuncu kunye nokutya (akukho lotywala). IHolly Grove inevenkile yotywala. IClarendon (imizuzu eyi-20 xa uqhuba) ineDollar General kunye neDewitt (imizuzu eyi-40 xa uqhuba) ineendawo ezingakumbi zokutyela onokukhetha kuzo, kunye neziko leevenkile zeTroger. I-Stuttgart (imizuzu eyi-45 xa uqhuba) ineWalmart, iklabhu kaSam kunye neevenkile eziphezulu.
Umbuki zindwendwe ngu- The Sportsman
Sinomntu wasekuhlaleni onokufumaneka kwindawo yakho kwisithuba se-2-4hours xa kukho izinto ezingxamisekileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Holly Grove